कलाकार पल शाहले कोभिड अवधिभर यस्तो राम्रो कार्य गर्ने! – PathivaraOnline
Home > समाचार > कलाकार पल शाहले कोभिड अवधिभर यस्तो राम्रो कार्य गर्ने!
कलाकार पल शाहले कोभिड अवधिभर यस्तो राम्रो कार्य गर्ने!
admin May 4, 2021 समाचार	0
काठमाडौं । अभिनेता पल शाहले अक्सिन सिलिण्डरको अभाव कम गर्नका लागि अभियान सुरूगर्ने बताएका छन्। अक्सिजन नपाएर समस्यामा परेका अस्पतालहरुलाई २-३ दिनभित्रै सहयोग गरिने शाहले बताए। ‘अक्सिजन नपाएर अस्पताल मा समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने हो। हामी अक्सिजन सिलिण्डर जम्मा गर्दैछौं।
भद्रपुर जाने यात्रु यसरी परे काठमाडौं एयरपोर्टमा अलपत्र (भिडियो हेर्नुस्)
कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल लैजाने एम्बुलेन्स नपाएपछि ट्र्याक्टरमा लैजादै गर्दा बाटोमै गयो ज्यान (भिडियो हेर्नुस्)
को’रोना त्रा’स: भोकभोकै खालि खुट्टा सयौँ माइल हिँडेर गाउँघर पुग्दै !
फेरि यस बर्ष पनि उर्लियो कोशी बाँधमा पानीकाे बहाव यस्तो खतराकाे सँकेत!
सुकुटे बस दुर्घटनाः आमा छोरा र छोरीको एउटा चिता, गरियो ७ को सामूहिक दाहसंस्कार ( तस्विर सहित)